In dunida maanta, qalabka iyo aad u badan u soo baxayaan in suuqa, waxaa ka mid ah nooca kala duwan oo kaamirada, iyo sababo tan aan haysan sabab weyn sababta si aad qoraal noo daqiiqado gaar ah oo isticmaalaya qalabka casriga ah. Oo waxaa uusan waxaa joojin! Waxaan jecel nahay in aan la qaybsano inay dunida kaga iyaga uploading in websites video qaybsiga kala duwan sida YouTube. YouTube waa video qaybsiga website-ka ugu caansan ee maanta, oo halkan waxaad ka heli kartaa nooc kasta oo videos laga yaabaa in aad rabto in aad eegto.
Laakiin dhibaatadu waxay tahay in, waxaa jira waqtiyo kaamirada iyo YouTube ma isku. Tani waa sababta oo kaamirada HD ugu maanta soo saaraan AVCHD formatted files iyo YouTube ma taageeri qaab this. Waa in aad ogaato in YouTube taageeri kartaa oo kaliya qaababkan soo socda: MOV, MPEG4, MP4, AVI, wmv, MPEGPS, FLV, 3GPP, iyo WebM. Laakiin dabcan, waxaa had iyo jeer waa xal fudud u diraynaa fudud.
Qeybta 1: Best AVCHD in Converter YouTube
Qeybta 2: AVCHD Free in Converter YouTube
Qeybta 3: AVCHD Online in Converter YouTube
Wondershare Video Converter Ultimate uu diyaar u yahay in uu kaa caawiyo noocan ah xaaladda si loogu badalo files AVCHD kuu geliyey YouTube qaab socon.
Tallaabada 1 Import File AVCHD ah
Waxaa jira laba jid oo sahlan in ay dajiyaan file AVCHD aad galay Wondershare Video Converter Ultimate ah, marka hore waa adigoo riixaya badhanka + Faylal ay dar in laga helo oo kaliya xarunta guddiga barnaamijka, file gal arbushin doonaa oo halkaas ka waxaad ka heli kartaa meesha uu file AVCHD aad rabto in aad si loogu badalo. Habka xigta ee aad isticmaali karto si aad dajiyaan file AVCHD waa in ay si fudud u faylka jiidi meel halkaas oo la badbaadiyey iyo hoos ee guddiga barnaamijka software-ka.
Tallaabada 2 Dooro YouTube qaabab socon Sida Qaabka Output ah
Laga soo bilaabo AVCHD, waxa la joogaa wakhtigii si ay u jeedi file wax la socday ay u shaqeeyaan oo ay kula ciyaaraan YouTube warbaahinta madal aan. Si tan loo sameeyo, ka dooro mid ka mid ah liiska hoos ku qoran Qaabka Output. Mid ka mid ah qaabab ugu isticmaali karo waa MOV si tusaale ahaan waxaan u isticmaali doonaa MOV sida qaab wax soo saarka.
Tallaabada 3 bilow Wareejinta
Just ka dhacay button diinta si ay u bilaabaan diinta haddii aad diyaar u tahay in loogu badalo file AVCHD kuu geliyey YouTube taageeray file format. Iyadoo video waxaa diinta, aad yara ama baabi'in kartaa qaab beddelidda.
Oo waxaa lagu sameeyey! Hadda waxaad ciyaari kartaa video diiwaan la your computer Windows oo aan wax dhibaato ah.
U oggolow naftaada badalo aad AVCHD files warbaahinta oo geliyaan on YouTube isticmaalaya Wondershare video Converter oo lacag la'aan ah . Waxay bixisaa oo dhan u baahnayn beddelaad iyo caawin kartaa in aad leedahay file a in jaanqaadi your computer iyo Qalabka telefoonada gacanta.
Miyuu shaqo soo celiyaa dhammaataan
Free version kaliya taageerada diinta caadi ahaan loo isticmaalo qaabab video.
Oo ma aad awooddid inaad dhigay qaab aad file wax soo saarka ee 3D, HD, oo gaar u ah qalabka qaar ka mid ah.
Xawaaraha Conversion waa deg deg ah, laakiin maaha sida ay u wanaagsan sida nooca buuxda.
Lama ogola in aad ku gubi CD ama DVD la version xorta ah.
Isku day inaad tan Converter online haddii aadan dhibaato si loo soo dajiyo wax on your computer.
Top 10 Most jeclaysteen iyo waxaanay jeclaysan Videos on YouTube
> Resource > YouTube > Sida loo Beddelaan AVCHD in YouTube qaabab socon